समताले अनुमति विनै कक्षा नौ चलायो - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
समताले अनुमति विनै कक्षा नौ चलायो
Published On : १० बैशाख २०७५, सोमबार १३:२१
गोरखा नगरपालिका स्थित ठुलो आँगन बस्ने सोनिया गुरुङ्ग कक्षा नौ बाट पास भएर १० मा गईन । उनी पास भएर १० मा गएको खुसी त एकातर्फ थियो नै सोही विद्यालयमा १० पढ्न पाउने होकी होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।
उनी समता फाउण्डेशनले सञ्चालनमा ल्याएको समता विद्यालयमा अध्ययनगरी कक्षा नौ पास गरेकी हुन् । विद्यालयले आफुहरुलाई अहिले समस्यामा पारेको उनको गुनासो छ । ‘नौ कक्षाबाट पास भएर १० मा गएँ’ उनले भनिन् ‘अब १० कक्षा कहाँ पढ्ने भन्ने नै थाहा छैन । यहाँ पढेर यहीँ जाँच दिन पाइँदैन रे जाँच दिन काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर प्रिन्सीपल सरले भन्नु भएको छ ।’ विद्यालयले अहिले पास भएका विद्यार्थीहरुलाई आधिकारीक सर्टिफिकेट समेत दिन नसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।
समताले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृती नै नलिई कक्षा नौ सञ्चालन गरेकोले अहिले विद्यार्थीहरुलाई समस्या भएको हो । स्रोतका अनुसार अहिले पनि स्वीकृती नै नलिई कक्षा १० सञ्चालन गर्ने योजनामा समता पुगेको छ । समतामा कक्षा नौ बाट १८ जना विद्यार्थी मध्ये १८ जना नै पास भएर १० मा गएका हुन् । उक्त विषयमा विद्यालयका प्रिन्सीपल दावा शेर्पालेपनि आधिकारीक रुपमा आफुलाई पनि थाहा नभएको जानकारी दिए । ‘समस्या भएको त पक्कै हो । स्वीकृत लिएको नलिएको आधिकारीकता मलाई पनि थाहा छैन । म पनि दशैँ पछि आएको हो । केन्द्रले केही दिनमा यहिँ गोरखामा बैठक गर्दै छ त्यसपछि सबै थाहा होला ।’
समतामा पढ्न पाउने नपाउने टुंगो नभएपछि विद्यार्थीहरु अहिले नजिकको सामुदायिक विद्यालयहरु मा जाने गरेका छन् ।
शिक्षा नियमावली अनुसार कक्षा नौ सञ्चालनका लागि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अघि शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै थप कक्षा सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
सम्बन्धीत विद्यालयले अनुमति लिनका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पत्र दिनुपर्ने भएपनि समताले अहिले सम्म आग्रह पत्र पठाएको छैन र अनुमति पत्र दुबै पाएको छैन ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुबेदीले पनि अनुमति लिए नलिएको भनेर प्रष्ट भन्न सकेनन् । ‘मैले पनि आज मात्र थाहा पाएको हो’ सुबेदीले भने ‘अनुगमन पनि रिपोर्ट पनि लिने तयारीमा छु । सोमबार म आफैँ त्यहाँ जान्छु । यदि उनीहरुले स्वीकृती लिएका रहेछन् भने कारबाही हुन्छ ।’